SABAB - Kahortaga Fikradaha Jinsiga
Barnaamijka Badbaadada Dugsiyada waxaa laga hirgeliyay iskuulada ku yaal Australia oo dhan iyadoo la barayo fikradaha jinsiga ee LGBT carruurta inta lagu jiro waqtiga aqoonsigooda galmada uu korayo iyo markay u nugul yihiin jahwareerka galmada. Awstaraaliya ayaa markii dambe aragtay qarax ka dhacay tirada caruurta ee loo qaaday xarumaha caafimaadka ee jinsiga. Websaytka CAUSE wuxuu leeyahay maqaallo badan oo xirfadleyaal ah oo ku saabsan transgenderism, Jinsiga Dysphoria, Daaweynta Isku-beddelka, Is-beddelka galmada iyo Dugsiyada Badbaadada leh, oo ay leeyihiin xirfadlayaal sida Professor John Whitehall, Professor Dianna Kenny iyo kuwo kale oo badan.
Iskuullo Ammaan ah.
Fikradaha Jinsiga ee Dugsiyada.
Dhakhaatiirta caafimaadku waxay soo bandhigaan xaqiiqooyinka Transgenderism.
Prof John Whitehall wuxuu wax ku qoraa majaladda Quadrant ee ku saabsan Jinsiga Dysphoria.
Horjoogeyaasha Hormoonka iyo dhammaan waxyaabaha Transgender.
La-talinta & Daaweynta Shaqeysa.
Laba nin oo lesbiiyaan ah, khaniisiin hore iyo hadalkii hore ee ka tegista noloshoodii hore ee LGBT. 13 dheeraad ah ayaa wadaagaya sheekooyinkooda qoran ee ku saabsan sida la-talinta ay u caawisay.
Walt Heyer's Sex Change Website Qoomamo.
Walt Heyer waxay ahayd haweeney Laura ah 10 sano ka hor inta aan la xirin oo ay qiratay in qofku uusan badali karin galmada.
Waxaa Loo Baahan Yahay In La Helo La Taliyayaal.
Halkan ka hel.
Fikradaha Jinsiga ee Dugsiyada Amni.
Ardayda Fasalka Ku Ciyaaraya Dabeecadaha LGBT
Barnaamijka Badbaadinta Dugsiyada ee fikradaha jinsiga waxaa soo wakiishay koox dad ah oo mowqifkoodu uu yahay mid sharaf leh iyadoo markii hore loogu talagalay in lagula tacaalo dhibaatada xoogsheegashada.
Waxa ay noqotay waxay bedelkeeda ka riixday xudduud ka baxsan baaxadda loogu maalgeliyay. Waxaan u istaageynaa oo aan taageereynaa Isbaheysiga Dowlada Federaalka sidii meesha looga saari lahaa maalgalinta iyo taageerida barnaamijkan qaabka uu hada ku jiro.
Ajandaha ay riixayaan isbahaysiga Iskuulada Nabdoon ayaa bartilmaameedsanaya dhalinyarada iyo carruurta da 'ahaan aad u nugul isla markaana ujeedkoodu yahay in laga sooco aasaaska qoyskooda iyo qiyamka bulshada si loo ilaaliyo muwaadiniinta oo dhan Waxaan kaa codsaneynaa inaad ka weeciso barnaamijkan una jeesato barnaamij sifiican loola dan leeyahay wax ka qabashada ka mid noqoshada iyo aqbalida MAYA salka ku haysa eexda iyo jinsiga.
Cudurka Jinsiga ee Dysphoria. 12 Taxane Video ah oo qoraallo lagu duubay.
Jahwareerka galmada. Daaweynta Hormoonka. Baadhitaanada Gudniinka Galmo Galmo. Latalinta cilmi nafsiga. Transgenderism Waa La Sharaxay.
BARNAAMIJ JOHN WHITEHALL.
Fiiri fiidiyowyada oo Ingiriis ah ama isticmaal turjumaanka Google boggan si aad u aqriso qoraallada ku qoran luqaddaada.
Waalid kasta wuu ogyahay in marka kor loo qaado caruurta, waxaa jira meelo badan oo adkaan karta in wax laga qabto, cunug kastana wuxuu u baahan yahay qorshe daryeel. Laakiin dhammaanteen waan ognahay in dabku yahay mid khatar ah, sidaa darteed waxaan ugu digaynaa carruurta khatarta habka ay u fahmi karaan. Uma ogolaanno iyaga inay ogaadaan in dabku uu yahay mid halis ah adigoo u ogolaanaya inay la ciyaaraan. Dhibaatooyinka iyo xanuunku waa la dareemayaa muddo dheer ka dib markii waxyeellada la qaban lahaa haddii tani ay sidaas ahayd. Sidaa si la mid ah, maxaan uga codsaneynaa inaan u ogolaano caruurteena in ay ku lug yeeshaan barnaamijyada kaas oo si caadi ah uga codsanaya caruurta in ay joojiyaan kalsoonida ay ku hayaan qeybtooda qoyska si ay u bixiyaan hagid looga baahan yahay in ay ka shaqeeyaan iyada oo loo marayo arrimaha dhalinyarada, koriimada iyo horumarka iyo iyada oo ku xiran "waxbarasho" si ka baxsan baaxadda xoog-sheegashada iyo aqbalaadda kala duwanaanshaha. Hase ahaatee taasi waa waxa Barnaamijka Iskuulada Badbaadada naga codsanaya in aan sameyno.
Xubin ka tirsan baarlamaanka Australia Mr. Andrew Haste.
Xildhibaan Andrew Hastie wuxuu ka hadlayaa barnaamijka “Dugsiyada Badbaadada leh” ee ka tirsan baarlamaanka Australia.
Fahmaan ajandaha iyo heerka ciyaarta - soo ogow sababta barnaamijkan loogu barto oo kaliya albaabada u xidhan iyo iyada oo aan waalidkood dooran. Haddii badbaadada carruurteennu ay tahay mid muhiimad gaar ah leh, waa inay u furnaataa baaritaanka iyo ka-qaybgalka dhammaan kuwa ay khusayso korinta dhallinyarada si ay u fahmaan inaan nahay dad aad u kala duwan, oo loo siman yahay dhinac walba. Weydiiso nuqul ka mid ah manhajka, oo haddii aad nasiib u yeelato inaad hesho iskuul diyaar u ah inuu shaaciyo nuxurkiisa, diyaar u noqo inaad fahanto baaqa waxqabad ee aannu ku hor dhignay.
Qalabka Roz Ward ee Dugsiyada Amniga ayaa qiray in Dugsiyada Badbaadadu aysan ka hadlin xoog sheegashada.
Roz Ward oo ah naqshadeeyaha barnaamijka "Dugsiyada Badbaadada leh" wuxuu qirayaa in Dugsiyada Badbaadada ah aysan ku saabsanayn xoog sheegasho.
Kuwa aanad weli diyaar u ahayn inay is dhiibaan xuquuqdaada waalid ahaan si ay u baraan una hogaansamaan carruurtaada iyagoo qibrad u leh qoyaan badanaaba qumman iyo jaahwareer, marwalba firfircoonow! Hadda waa wakhtigii lagu biirin lahaa taageerada ka saarista barnaamijkan tijaabada ah iyo kuwa kala qaybinta.
Hooyo waxay kahadleysaa ogaanshaha fikradaha jinsiga ee wiilkeeda lagu barayo dugsiga.
Sheekada Cella ee ku saabsan caruurteeda iyo barnaamijka “Dugsiyada Badbaadada leh” ee dugsigooda.
Waa kuwan sidaad dib ugu soo ceshan lahayd bulshadeena inay si firfircoon u kobciyaan dareenka xooggan ee ka mid noqoshada iyo aqbalida:
Ku firfircoonow iskuulkaaga. Soo ogow waxqabadka bulshada ee ay hadda ku hayaan dabaaldega bini-aadamka gaarka ah ee bulshada ka kooban - ku soo biir oo u dabaaldeg dhacdooyinka badan ee dugsiyadu ay ku taageeraan dhammaan xubnaha bulshada dugsigooda - ma aha oo keliya kuwa qorshahoodu ku wajahan yahay galmada aqoonsi ahaan aasaas u ahaansho.
Raadi waxa iskuulkaagu baro iyo barnaamijyada ay u adeegsadaan inay ku baraan carruurta iyo dhalinyarada ku saabsan aqbalaadda DHAMMAAN noocyadeeda - oo ku saabsan sinnaanta, naxariista, iyo fahamka kala duwanaanta dhammaan noocyada. Ku taageer dugsigaaga in lagu wargeliyo oo la fahmo in SAFE aysan u dhigmin kaliya kuwa la galmoodo.
Dib ula soo noqo erayga SAFE - hubi inaysan eray u ahayn qurxinta carruurta wixii ka baxsan fahamkooda iyo u janjeedhka dabiiciga ah ee xiisaha. Carruurtu waxay ku bislaadaan heerar kala duwan barnaamijkanna ma ogola tan. Waxay ku qasbeysaa fikirka iyo go'aan gaarista meelaha xasaasiga ah ka hor inta carruur badani aysan diyaar u ahayn inay fahmaan baaxadda iyo muddada dheer ee xulashooyinka la sameynayo. Bisaylka iyo bislaanshaha galmada LAMA qasbi karo oo habka looga saarayo kaqeybgalka waalidka barnaamijkan ayaa ansaxinaya, ma ahan hindise caafimaad oo aan si fudud u fariisaneyno oo aan aqbalno. MAYA dheh! oo hubi inuu dugsigaaga ka warqabo go'aankaaga.
Haddii carruurtaadu aanay weli dugsiga joogin, ka ogow dugsiyada ku yaala agagaarkaaga adoo booqanaya iyaga oo weydiisanaya inay ku dhex socdaan xilliga fasaxa ama mudada bilaashka ah. Fiiri sida caruurtu ula dhaqmayaan midba midka kale oo u fiirso carruurta aqbalaadda dabiiciga ah ee dadka kale ficilka.
U qor qoraalkaaga MP ama Premier oo ha u ogaadaan inaad taageertid dawlad-goboleedka Fadaraalka si ay uga saarto barnaamijkan iyada oo loo marayo barnaamij hufan oo firfircoon. SAFE waxeey ka dhigan tahay in ka badan inta la og yahay galmoodka iyo in lagu daro aqbalo dhammaan foomamka. Barnaamij kaas oo taageera unugga qoyska wuxuuna u oggol yahay in uu ka shaqeeyo barista jiilka soo socda qiimaha iyo fahamka aasaasiga ah ee Barnaamijka Iskuulada Badbaadada ay doonayaan inay ka soo baxaan.
Ka hor inta aanad codeyn, hubi inaad ogtahay waxa musharax kasta oo taageeraya iyo barnaamijyada ay ku ansixin doonaan. Qaado codkaaga si dhab ah oo farriin u dir musharraxiinta inaadan u dulqaadan doonin xayiraadda xuquuqda qoyska.
Xukuumaddu waxay bixin kartaa oo keliya waxa aan rabno, haddii aan marka hore u sheegno. Fahmaan oo u dabaaldegaan kartidaada sida waalidku u hagayo ilmahaaga. Haddii ay kugu adkaato inaad la xiriirto oo aad fahamto kaalintaada, raadso oo isdiiwaangeliso barnaamijyada taageerada waalidnimada ee ay maamusho xarumaha bulshada ee degaanka. Ma aha ikhtiyaarka amniga ah in carruurtaada ay ku lug yeeshaan barnaamij kaas oo albaabada ku xiray oo aad ku dhiirigelisey sirta iyo "asturnaanta" oo ay riixday doorashadii Dugsiyada Badbaadada ee loogu yeero.
Ha u oggolaan in barnaamijkani uu kaa xiro-WAXA LAGU HAYO!
Nala soo xiriir. Emayl: sababa.victoria@gmail.com
Naga caawi sidii aan u badbaadin lahayn carruurteenna.
Ugu deeqo SABABTA. Bangiga: NAB BSB: 083-547 ACC: 87-690-0206